को बन्ला यस वर्षको 'महामूर्ख' ? - नेपाल समय
को बन्ला यस वर्षको 'महामूर्ख' ?
जनकपुरधाम- होली रौनकले देशलाई छपक्कै छोपेको छ । पहाडका जिल्लाहरुमा बुधबार होली मनाइँदै छ । तर, जनकपुरमा भने १५ दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा अन्तरगृह परिक्रमा गरिसकेपछि मात्र होली मनाइने छ । विहिबार अन्तरगृह (जनकपुर) को परिक्रमा भइसकेपछि शुक्रबार जनकपुरमा होली पर्व मनाइने छ ।
होली आउन केहि दिन बाँकी रहेपनि जनकपुरमा होलीको उत्सव भने केहिदिनअघि सुरु हुन्छ । सद्भाव र भाइचाराको पर्वको रुपमा लिइने होलीलाई एकअर्काप्रति व्यङ्ग्य गर्ने पर्वको रुपमा समेत लिइन्छ, मिथिलाञ्चलमा ।
होलीको अवसर पारेर एकअर्कालाई हँस्यौली ठठ्यौली गर्ने यहाँको परम्परा रहेको छ । मुख्य रुपमा जोगिरा (होलीमा गाइने लोकगीत) मार्फत व्यङ्ग्य गरिन्छ भने होलीमा गाइने यस्ता गीतहरुले पारम्परिक संस्कृतिको छनक समेत दिइरहेको हुन्छ ।
होलीको अवसरमा व्यङ्ग्य र ठठ्यौलीको रुपमा जनकपुरमा महामूर्ख सम्मेलनको आयोजना हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । वास्तविक जीवनमा कोहिपनि आफूलाई महामूर्ख कहलाउन चाहँदैन् । तर होलीको अवसरमा दिइने ‘महामुर्ख’ को उपाधि पाउन जनकपुरमा तछाडमछाड हुने गरेको छ । होलीको अवसरमा दिइने महामुर्खको उपाधि पाउने व्यक्ति आफूलाई गौरवान्वित ठान्ने गर्दछन् ।
उपाधि महामुर्खको रहेपनि पाउने व्यक्ति चर्चित राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक अभियन्ताजस्ता हुन्छन् । अन्य वर्षझैं यस वर्षपनि जनकपुरमा महामूर्ख सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ । कलासंस्कृति तथा साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको मिथिला नाट्यकला परिषदले ६ चैतमा महामुर्ख सम्मेलन गरिरहेको छ । यसअघि ५ चैतमा परिषद्ले होरी महोत्सवको आयोजना गरिरहेको छ ।
जानकी मन्दिर परिसरभित्र आयोजना हुने होरी महोत्सव र महामुर्ख सम्मेलन हेर्न ठुलो संख्यामा सर्वसाधारण पुग्ने गर्दछन् । यसवर्षको महामुर्ख खोज्न आयोजक संस्था मिथिला नाट्यकला परिषद् जुटिसकेको छ । महामुर्खको उपाधि पाउने व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको परिषद्का महासचिव शैलेन्द्र मल्लिकले जानकारी दिएका छन् ।
महामुर्ख सम्मेलनको अवसरमा मैथिली क्षेत्रका कवि, साहित्यकारहरुले राजनीति, राजनीतिज्ञ, समाजिक कुरुतीजस्ता विषयहरुमा गर्ने व्यङ्ग्यात्मक प्रहारले छुट्टैखाले मनोरञ्जन दिने गर्दछ ।
मिथिलाको पारम्परिक होली, लोकभाकामा गाइने होलीका गीतहरु बढ्दै गरेको आधुनिकताका कारण लोप भइरहेको बेला मिथिला नाट्यकला परिषद्का यस्तो आयोजनाले संरक्षण गर्न ठुलो मद्त गरेको संस्कृतिविद्हरु बताउँछन् ।
मिथिला नाट्यकला परिषद्ले गत वर्ष महामुर्खको उपाधि राष्ट्रियसभा सदस्य एवं राजपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाललाई दिएको थियो । २०६१ सालदेखि मिथिला नाट्यकला परिषदले महामुर्ख सम्मेलनको आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।
महामुर्खको उपाधि पाउने पहिलो व्यक्ति हुन् मैथिली कवि नरेश ठाकुर । २०६२ मा तत्कालीन एमाले नेता शीतल झा, २०६३ मा जनकपुर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हरिबहादुर बिसी, २०६४ मा तत्कालीन सदभावना पार्टीका नेता ओमकुमार झा, २०६५ मा वरिष्ठ साहित्यकार डा.राजेन्द्र विमल २०६६ मा पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका नेता रामचन्द्रले महामुर्खको उपाधि पाएका थिए ।
यसैगरी २०६७ मा राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, २०६८ मा साहित्यकार रामभरोस कापडि, २०६९ मा नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन जिल्ला सभापति रामसरोज यादव, तत्कालीन तमलोपाका पूर्वसांसद डा.विजयकुमार सिंह, २०७१ मा तत्कालीन एमाले नेता शत्रुध्न महतो र २०७२ मा समाजसेवी पवन सिंहानीयाले महामुर्खको उपाधि पाएका थिए । २०७३ मा मधेश आन्दोलनले गर्दा कार्यक्रम हुन सकेको थिएन् ।
जग्गा हदबन्दी लगाउन माग
प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयकबारे उपत्यका...
डोटीमा अस्थायी साधन प्रयोगको सट्टा महिनैपिच...
प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयकबारे उपत्यकाका सांसद र विज्ञसँग छलफल ...
मोदीले लिए लोकसभा सदस्यको सपथ